Global iyo Shiinaha Micromotor Industry Report, 2016-2020 - Shiinaha Shandong Better Motor
Global iyo Shiinaha Micromotor Industry Report, 2016-2020
saarka micromotor Global ee 17.5 bilyan unugyo istaageen 2015, koror 4.8% sanad-on-sano. Thanks to ololayaal oo casriyaynaysa warshadaha iyo qalabka, wax soo saarka ayaa la filayaa inuu soo kici doono 18.4 bilyan unugyo 2016 iyo u Dhawaanina 23 bilyan unugyo ee 2020.
Shiinaha, soo saaraha ee dunida ugu weyn ee micromotors, soo saaray 12.4 bilyan unugyo 2015, ilaa 6.0% sannad ka hor, iyo xisaabiyenimo 70,9% wadarta guud ee caalamka. saarka micromotor dalka ee la saadaaliyo inuu ku dhow yahay 17 bilyan unugyo 2020 at CAGR ah ku dhawaad ​​7.0% inta lagu jiro 2016-2020.
saarayaasha Keymicromotor ee Shiinaha includeJohnson Electric, duulayaan Holding Limited, Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd., oo Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, sida soo saaraha ugu weyn micromotor ee Shiinaha, gaadhaysaa dakhliga sanadlaha ah ee overUSD1 billion, la share caalami ah suuqa ee 4.3% ee 2015.
In Shiinaha, micromotor helaa ay codsi ugu horrayn ee beeraha dhaqanka, sida wax soo saarka audio, qalabka guriga, iyo gaari, taas oo lagu qabtay tiro la isku daray ee 52,4% in 2015. Sida suuqyada codsiga dhaqanka si tartiib tartiib ah koraan cokan, darawallada ugu weyn ee koritaanka micromotor loo soo baxaya doonaa qaybaha sida baabuur cusub tamarta, qalabka wearable, robot, UAV, iyo guriga smart.
Information Warshadaha: Shiinaha ee shixnadaha ee VCM for boosteejada mobile ahaayeen 542kk 2015, ilaa 12.9% sannadkii on sano, ka dadbaya 45,9% wadarta adduunka ee, inta badan kala eryay by casriga ah iyo kumbiyuutarada kiniin. Iyada oo u damaysay tartiib ah suuqyada ee macaamiisha qalabka korontada dhaqanka sida casriga ah iyo kiniin PC, qalabka wearable noqon doonaa goobta cusub oo koritaanka, sii xoojinaya baahida loo qabo micromotor. suuqa qalabka wearable Shiinaha la saadaaliyo in ay ballaariso heerka koritaanka sanadlaha ah ee in ka badan 25%.
Automobile: In 2015, baahida Shiinaha ee micromotor baabuurta ahaa 1.02 billion units (24.9% wadarta guud ee caalamka, ayaa la filayaa inuu kor u kaco in 1,62 billion unugyada ee 2020), wax ka yar 3% laga gaari tamarta cusub soo socda. iibka baabuurta tamarta New koray at heerka xarunta sanadlaha ah ee 152,1% inta lagu jiro 2011-2015 ee Shiinaha iyo, iyada oo taageero siyaasadaha qaranka iyo kuwa maxalliga ah, quudin doonaa dardar koritaanka xoog leh ka soo socda sano. Waxaa lagu qiyaasaa in suuqa of micromotors baabuurka tamar cusub hayn doonaa laga fuulo oo ka badan 40% sanad walba inta lagu guda jiro 2016-2020 baahida aad iyo aad bay 150 milyan oo unugyo ee 2020.
Robot: 248.000 aalado warshadaha iyo 6,41 milyan oo aalado adeega la iibiyey adduunka ee 2015, ilaa 8.3% iyo 35.7% ka sanad ka hor, siday u kala horreeyaan, wada abuuro dalabka ah oo ku saabsan 66.6 million micromotors (qiyaasta in ka badan 300 milyan oo unugyo 2020) . In 2015, Shiinaha lagu tiriyaa 22.9% iibka robot warshadaha dunida iyo kaliya oo ku saabsan 5.0% ee iibka robot adeeg, taasoo muujinaysa boos weyn koritaanka.
UAV Consumer-fasalka: In 2015, iibka UAV caalamiga ah macaamiisha-fasalka dhaafo 200,000 oo unug, iyadoo kaliya ka yar 20,000 units ee Shiinaha marka la barbar dhigo. Sida hawada low-sare waxaa si tartiib ah u furay, suuqa UAV Chinese gayaysiin doona in mudo ah koritaanka saa'idka ah ee heerka in ka badan 50%.
Intaa waxaa dheer, suuqyada cusub ee daabacaadda 3D, guriga smart, qalabka caafimaadka, iyo shaybaarka qalabaynta ay taageerayaan siyaasadaha waxay bilaaban doonaa marsho sare, sii wadidda baahida loo qabo micromotors.
Global iyo Shiinaha Micromotor Industry Report, 2016-2020 muujineysaa ka dib ah,
warshadaha Global micromotor (taariikhda horumarka, size suuqa, qaab-dhismeedka suuqa, muuqaalka dhirta ee tartan rasmi ah, iwm);
Warshadaha Micromotor ee Shiinaha (status quo, size suuqa, qaab-dhismeedka suuqa, muuqaalka dhirta ee tartan rasmi ah, soo dejinta iyo dhoofinta, iwm);
Warshadaha Main kheyraad (qalabka magnetic, dhalista, iwm), ku lug leh size suuqa, qaab-dhismeedka suuqa, isbeddellada horumarinta, iwm .;
Warshadaha Downstream (warbixin, gaari, qalabka qoyska, robot, UAV, daabacaadda 3D, guriga smart, qalabka caafimaadka, iwm), ku lug leh codsiga iyo suuqa;
11 Global iyo 10 saarayaasha micromotor Chinese (hawlgalka, ganacsiga micromotor, horumarinta ee Shiinaha, iwm).